OTU ESI WEPU APPLE ID IPHONE - IOS - 2019
Usoro mkparịta ụka na-akpụ akpụ bụ ngwá ọrụ ndekọ aha nke ị nwere ike idozi ụdị nsogbu dị iche iche. Karịsịa, a na-ejikarị ya akọwa. Na Excel, ngwá ọrụ a nwekwara ike iji dozie ọtụtụ ọrụ. Ka anyị hụ otú e si eji Excel eme ihe.
Njikere nke na-agagharị agafe
Ihe nke usoro a bu na site n'enyemaka ya, enwere mgbanwe nke ihe omuma di omimi nke usoro a choputara na onu ogugu maka oge ufodu site na igbanye data. A na-eji ngwá ọrụ a mee ihe maka nchịkọta akụ na ụba, ịkọwapụta, na usoro ịzụ ahịa na mgbanwe ngwaahịa, wdg. Ọ kachasị mma iji Usoro ntụgharị nke Excel na enyemaka nke ngwá ọrụ kachasị ike maka nhazi data nchịkọta akụkọ, nke a na-akpọ Nchịkọta akụkọ. Na mgbakwunye, maka nzube ndị a, ịnwere ike iji ọrụ Excel ahụ arụpụtara. Ekele.
Usoro 1: Nchịkọta Nchịkọta
Nchịkọta akụkọ bụ ihe tinyekwuru Excel nke nwere nkwarụ site na ndabara. Ya mere, nke mbụ, ọ chọrọ iji mee ya.
Bugharịa na taabụ "Njikwa". Pịa ihe. "Nhọrọ".
Na windo window nke amalite, gaa na ngalaba Tinye-ons. N'okpuru windo dị n'ọhịa "Management" a ghaghị ịtọ ntọala Excel Add-ins. Pịa bọtịnụ "Gaanụ".
Anyị na-abanye na windo tinye-ons. Tinye akọrọ n'akụkụ ihe a "Nchịkọta Nyocha" ma pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Mgbe ihe ngwugwu a "Nyocha data" arụ ọrụ, na bọtịnụ kwekọrọ na bọtịnụ na tab "Data".
Ugbu a, ka anyị lelee otu ị ga - esi jiri ikike nke ngwugwu ahụ rụọ ọrụ ozugbo. Nyocha data na-arụ ọrụ na usoro mkpali na-akpụ akpụ. Ka anyị, site na ihe ọmụma banyere ego nke ụlọ ọrụ ahụ n'ime oge 11 gara aga, mee amụma maka ọnwa iri na abụọ. Iji mee nke a, anyị na-eji tebụl jupụtara data na ngwaọrụ. Nchịkọta akụkọ.
Gaa taabụ "Data" ma pịa bọtịnụ ahụ "Nyocha data"nke etinyebere na teepu ngwá ọrụ na ngọngọ ahụ "Nyocha".
Ndepụta ngwaọrụ ndị dị na Nchịkọta akụkọ. Anyị na-ahọrọ aha ha "Ngozi Na-agagharị" ma pịa bọtịnụ ahụ "OK".
A na-emepe windo ntinye data iji mee ka amụma ịghafe.
N'ọhịa "Oge mbata" kọwaa adreesị nke nso, ebe ọnụọgụ ego nke ọnwa ọ bụla na-enweghị na cell, data nke a ga-agbakọ.
N'ọhịa "Mkpisi" kọwaa oge nke usoro nhazi site na iji nwayọ smoothing. Iji malite, ka anyị mee ka uru dị mma ruo ọnwa atọ, ma tinye ọnụ ọgụgụ ahụ "3".
N'ọhịa "Nhazi mmepụta" ịkwesịrị ịkọwapụta ihe na-enweghị ntụpọ na mpempe akwụkwọ ahụ, ebe a ga-egosipụta data ahụ mgbe ọ nyesịrị, nke kwesịrị ịbụ otu cell karịa oge ntinye.
Cheekwa igbe dị n'akụkụ "Ụgha ntụpọ".
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwekwara ike ịlele igbe na-esote "Ejikere" maka ngosipụta ngosi, ọ bụ ezie na ọ bụ na ọ dịghị mkpa na anyị.
Mgbe emechara ntọala niile, pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Usoro ihe omume ahụ na-egosiputa utịp nke nhazi.
Ugbu a, anyị ga-emecha nhichaa maka oge nke ọnwa abụọ iji kpughee ihe ga-esi na ya pụta. Maka nke a, anyị na-agbagha ngwá ọrụ ahụ ọzọ. "Ngozi Na-agagharị" Nchịkọta akụkọ.
N'ọhịa "Oge mbata" Hapụ otu ụkpụrụ ahụ dị ka ọ dị na mbụ.
N'ọhịa "Mkpisi" tinye nọmba ahụ "2".
N'ọhịa "Nhazi mmepụta" anyị na-ezipụta adreesị nke ebe ọhụụ ọhụrụ ahụ, nke, ọzọ, ga-abụ otu cell karịa oge ntinye.
Ntọala ndị fọdụrụ na-agbanwe agbanwe. Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Mgbe nke a gasịrị, usoro ihe omume ahụ na-agbakọ ma na-egosiputa nsonaazụ na ihuenyo ahụ. Iji chọpụta nke n'ime ụdị abụọ ahụ bụ ihe ziri ezi, ọ dị anyị mkpa iji tụnyere njehie. Ngosipụta a nke dị ntakịrị, nke ka elu bụ ihe gbasara nke puru omume nke izi ezi nke nsonaazụ. Dị ka ị nwere ike ịhụ, n'ihi na ụkpụrụ niile nke njehie na-ezighị ezi na ngụkọta nke ọnwa abụọ ọhụụ bụ ihe na-erughị otu ihe ahụ maka ọnwa 3. Ya mere, a ga-atụle uru amụma nke December ga-ewere dị ka ọnụọgụ nke nchịkọta nke oge ikpeazụ. N'ọnọdụ anyị, uru a dị 990.4 puku rubles.
Usoro 2: jiri ọrụ AVERAGE
Na Excel enwere ụzọ ọzọ iji jiri usoro mgbasa ozi na-agagharị. Iji jiri ya, ịkwesịrị itinye ọtụtụ ihe omume usoro ihe omume, nke bụ isi maka maka nzube anyị Ekele. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-eji otu tebụl nke ego ụlọ ọrụ dị ka nke mbụ.
Dị ka oge ikpeazụ, ọ ga-adị anyị mkpa ịmepụta usoro usoro oge. Mana oge a, omume agaghị arụ ọrụ. Dee onu ogugu onu ogugu onu ogugu abali abuo na onwa ato iji nwee ike jiri onu ogugu.
Nke mbụ, anyị na-agbakọ ọnụ ọgụgụ dị elu maka oge abụọ gara aga site na iji ọrụ ahụ Ekele. Anyị nwere ike ime nke a na-amalite na March, ebe ọ bụ n'ihi na oge ikpeazụ, enwere ike ịkwụsị ụkpụrụ.
Họrọ cell na klas efu na eriri maka March. Ọzọ, pịa akara ngosi ahụ "Tinye ọrụ"nke dị nso na ntụ ọka.
Window arụ ọrụ Ndị isi ọrụ. Na ụdị "Nkọwapụta" na-achọ uru "SRZNACH"họrọ ya wee pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Njikwa esemokwu arụ ọrụ malitere. Ekele. Nkọwa ya bụ:
= ỤLỌ (nọmba1; nọmba2; ...)
Naanị otu arụmụka achọrọ.
N'ọnọdụ anyị, n'ọhịa "Number1" anyị ga-enye njikọ na nsochi ebe a na-egosi ego maka oge abụọ gara aga (January na February). Debe cursor n'ọhịa wee họrọ sel ndị kwekọrọ na mpempe akwụkwọ ahụ na kọlụm "Ego". Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Dịka ị pụrụ ịhụ, a gosipụtara ihe na-esi na ịgbakọ nkezi maka oge abụọ gara aga na cell. Iji mee nchịkọta yiri nke ahụ maka ọnwa niile fọdụrụnụ, ọ dị anyị mkpa iṅomi usoro a na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ. Iji mee nke a, anyị na-aghọ cursor na akụkụ aka nri ala nke cell nwere ọrụ ahụ. A na-agbanwe cursor ahụ ka ọ bụrụ ihe akara juru, nke yiri obe. Jidea bọtịnụ òké aka ekpe ma dọrọ ya ruo na njedebe nke kọlụm ahụ.
Anyị na-enweta ngụkọta nke ihe nrite ọ bụla maka ọnwa abụọ gara aga tupu ọgwụgwụ afọ.
Ugbu a, họrọ cell na mpịakọta na-esote na eriri maka April. Kpọọ windo arụmụka arụ ọrụ ahụ Ekele n'otu ụzọ ahụ dị ka akọwapụtara n'oge gara aga. N'ọhịa "Number1" banye nhazi nke mkpụrụ ndụ dị na kọlụm "Ego" malite na Jenụwarị ruo March. Wee pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Jiri akara njuputa, detuo usoro a na teepu okpokoro n'okpuru.
Ya mere, anyị gbakọrọ ụkpụrụ ahụ. Ugbu a, dịka na oge gara aga, anyị ga-achọpụta ụdị ụdị nyocha dị mma: na-edegharị aha na ọnwa 2 ma ọ bụ 3. Iji mee nke a, gbakọọ nhazi ọkọlọtọ na ụfọdụ ihe ngosi ndị ọzọ. Nke mbụ, anyị na-agbakwụnye nhichapụ zuru ezu site na iji ọrụ Excel ahụ. ABS, nke karia akara nke oma ma obu nke na-adighi nma laghachiri usoro ha. Uru a ga-abụ ihe dị iche n'etiti ego a ga-enweta maka ọnwa a họọrọ na amụma. Debe cursor na mpịakọta na-esonụ dị n'usoro maka May. Kpọọ Ọkacha Ọrụ.
Na ụdị "Mgbakọ na mwepụ" họrọ aha ọrụ ahụ "Abs". Anyị pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Mmalite arụmụka arụ ọrụ malitere. ABS. Na otu ubi "Ọnụ ọgụgụ" kọwaa ọdịiche dị n'etiti ọdịnaya nke mkpụrụ ndụ dị na ogidi "Ego" ma "Ọnwa 2" maka May. Wee pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Site n'iji akara egosiputa, anyị na-edezi usoro a na mpaghara niile dị na tebụl site na November gụnyere.
Chọpụta ọnụọgụ nke ọnụ ọgụgụ zuru oke maka oge niile site na iji ọrụ anyị maara nke ọma Ekele.
Anyị na-eme otu usoro ahụ iji gbakọọ ntụgharị kpamkpam maka onye na-agbagharị maka ọnwa 3. Anyị bu ụzọ jiri ọrụ ahụ ABS. Naanị oge a, anyị na-atụle ọdịiche dị n'etiti ọdịnaya nke mkpụrụ ndụ ndị nwere ego na atụmatụ ahụ, ezubere site na iji usoro nkezi na-agagharị agagharị maka ọnwa 3.
Na-esote, anyị na-agbakọọ ọnụ ọgụgụ nke njedebe kpamkpam iji ọrụ ahụ Ekele.
Nzọụkwụ ọzọ bụ iji gbakọọ njedebe mmekọrịta ahụ. Ọ bụ nha nhata nke kpamkpam na ihe ngosi ahụ. Iji zere ụkpụrụ ọjọọ, anyị na-ejikwa ohere ndị ọrụ ahụ na-enye ABS. Oge a na-eji ọrụ a, anyị na-ekewa uru zuru oke mgbe ị na-eji usoro nkezi na-agagharị agagharị maka ọnwa 2 site na ezigbo ego maka ọnwa ahọrọ.
Ma, ọ na-egosipụtakwa nkewa dịka pasent. Ya mere, họrọ ebe kwesịrị ekwesị na mpempe akwụkwọ, gaa na taabụ ahụ "Home"ebe na ngwaọrụ ngbochi "Ọnụ ọgụgụ" Na nhazi usoro azu, dozie onu ogugu. Mgbe nke ahụ gasịa, ihe nrịta nke ịkọpụta nhichapụ onye ahụ na-egosi na pasent.
Anyị na-arụ ọrụ yiri nke a iji tọọ ihe nkedo nke ya na data ahụ site na iji nwayọọ mee ọnwa 3. Naanị na nke a, iji gbakọọ dị ka dividend, anyị na-eji kọlụm ọzọ nke tebụl, nke anyị nwere aha "Abs. Gbanyụọ (3m)". Mgbe ahụ, anyị na-asụgharị ụkpụrụ ọnụọgụgụ na pasent.
Mgbe nke ahụ gasị, anyị na-agbakọọ ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ maka ma ogidi ndị ahụ dị iche iche, dị ka tupu iji iji ọrụ a mee ihe Ekele. Ebe ọ bụ na anyị na-etinye ụkpụrụ pasent maka ọrụ dị ka arụmụka nke ọrụ ahụ, anyị adịghị mkpa ntụgharị aka ọzọ. Onye ọrụ na mmepụta na-enye nsonaazụ ugbua na usoro nhazi.
Ugbu a, anyị na-atụle ngbanwe nke ọkọlọtọ. Ngosipụta a ga-enye anyị ohere iji ọnụ ọgụgụ nke mgbagwoju anya tụnyere mgbe ị na-eji mgbochi aha maka ọnwa abụọ na ọnwa atọ. N'ọnọdụ anyị, nkwekọrịta ọkọlọtọ ga-adị ka mgbọrọgwụ nke njedebe nke ogige nke ọdịiche dị iche iche na ego a na-akwụ na ego ndị na-agafe na-ekewa site na ọnụ ọgụgụ nke ọnwa. Iji mee mkpakọ na usoro ihe omume ahụ, anyị ga-eji ọtụtụ ọrụ, karịsịa Mgbọrọgwụ, SUMMAKRAVN ma Akaụntụ. Dịka ọmụmaatụ, iji gbakọọ nhazi ọkọlọtọ mgbe ị na-eji akara smoothing maka ọnwa abụọ n'ọnwa May, n'ọnọdụ anyị, a ga-etinye usoro na-esonụ:
= Echiche (SUMKVRAZN (B6: B12; C6: C12) / Akaụntụ (B6: B12))
Anyị na-edezi ya na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ nke kọlụm ahụ na ngụkọta nke ntule nke ọkọlọtọ site na ntinye ederede.
Anyị na-arụ ọrụ yiri nke a maka ịgbakọ nhapụta ọkọlọtọ maka ntụgharị oge maka ọnwa 3.
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-agbakọọ ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ maka oge niile maka ma ihe ndị a, itinye n'ọrụ ahụ n'ọrụ Ekele.
N'iji ntughari nke mgbagwoju anya mee ihe site n'iji usoro ugwo na-agaghari site n'iji nwayo di n 'onwa abuo na onwa ato site na iji akara dika ngbasa, ngbanwe nke ndi ikwu na ntughari ihe di iche, anyi puru ikwu na onwa abuo na-eme ka ndi mmadu nwee obi uto karia iji ochi ato. Nke a gosipụtara na eziokwu ahụ dị n'elu maka ọnwa abụọ na-aga n'ihu na-erughị ọnwa atọ.
N'ihi ya, ụgwọ ọrụ nke ụlọ ọrụ na December ga-abụ 990.4 puku rubles. Dịka ị pụrụ ịhụ, uru a bụ otu ihe ahụ anyị natara, na-eme ka ị gbakọọ iji ngwa Nchịkọta akụkọ.
Anyị gbakọrọ amụma ahụ site na iji ụzọ nkezi na-akpụ akpụ na ụzọ abụọ. Dị ka ị pụrụ ịhụ, usoro a dị mfe karịa iji ngwaọrụ arụ ọrụ. Nchịkọta akụkọ. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ọrụ adịghị atụkwasị atụmatụ ngwongwo obi mgbe niile ma họrọ ka ha jiri ọrụ maka nyocha. Ekele na ndị ọrụ metụtara ya iji chọpụta nhọrọ kachasị ịtụkwasị obi. Ọ bụ ezie na, ma ọ bụrụ na ihe niile mere n'ụzọ ziri ezi, na mmepụta ihe nsonaazụ ahụ ga-apụta kpamkpam.